Martida Makaroofanka Iyo Danjire James Swan
Sabti, Bisha Afraad 30, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 06:17
Danjiraha Maraykanka u qaabilsan arrimaha Somalia, James Swan oo marti ku ahaa barnaamijka Martida Makroofanka ee Idaacadda VOA ayaa ku ammaanay Madaxda Soomaalida kaalintii ay ku lahaayeen hanaanka kala-guurka.
Danjiruhu waxa uu sheegay in hanaanku uu adag yahay, laakiin, sida wax ku socdaan, marka ugu dambeysa la dhameystiri doono.
Danjire James Swan oo si gaar ah barnaamijka Martida ugu warramay Madaxa laanta Afka Somaliga VOAda Cabdiraxman Yabarow, waxaana aa la soo jeedinaya Ibrahin Xassan Dandurey. Halka hoose ee qoraalkan ka dhageyso.
Barnaamijka Martida Makaroofanka halkan ka dhageyso
Barnaamijka Martida Makaroofanka halkan ka dhageyso i